အပြောကောင်းတဲ့ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ မအေးသောင်း - Cele Connections
အပြောကောင်းတဲ့ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ မအေးသောင်း
အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး လူသိများကျော်ကြားလာခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ ပေါ်လွင်လှပတဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား မြင့်မားတဲ့အရပ်အမောင်းနဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တို့ကို ခေတ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းလဲသွားပါစေ ပရိသတ်တွေက သဘောကျစွဲမက်နေမြဲပါပဲ။ သူမဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက မင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့လည်း ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနုပညာလောကထဲကနေ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှု တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာတော့ အေးဝတ်ရည်သောင်းဟာ အေးသောင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကတဆင့် ပရိသတ်ကြီးရှေ့ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။ မအေးသောင်းကတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်ထက်ကနေ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက သူမအပေါ်အာရုံစိုက်မိလာကြပြီး ဆက်လက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မအေးသောင်းဟာ ယခုချိန်မှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို တစိုက်မတ်မတ်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် သူမရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိုတော့ ပရိသတ်တွေရှေ့ ကို တရားဝင်ချပြထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ မကြာသေးခင်ကလည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ “ရည်းစားဟောင်းရဲ့ လက်သုံးစကား…. လက်ရှိသူ့ကိုတွဲနေပေမယ့် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ရှိတာကတော့ မင်းတစ်ယောက်ပဲ….လို့ ဆိုပြီးပြောတာ မင်းနော်။ ကိုယ်ကဘာမှ သိတာမဟုတ်ဘူး”…. လို့မျှဝေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ အပျိုကြီးမအေးသောင်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းက ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
အပျိုကြီးမအေးသောင်းရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့ပို့စ်အောက်မှာ မှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးပြီး အားပေးစကားဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးကလည်း မအေးသောင်းတစ်ယောက် ရည်းစားဟောင်းကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကနေ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့သစ်လေးတွေကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
အပွောကောငျးတဲ့ ရညျးစားဟောငျးအကွောငျး ဖှငျ့ဟလာတဲ့ မအေးသောငျး
အေးဝတျရညျသောငျးကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါကို မျောဒယျလျတဈယောကျအနနေဲ့ စတငျဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး လူသိမြားကြျောကွားလာခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အမြားနဲ့မတူတဲ့ ပျေါလှငျလှပတဲ့ ကိုယျနဟေနျထား မွငျ့မားတဲ့အရပျအမောငျးနဲ့ ဆံနှယျရှညျတို့ကို ခတျေတှဘေယျလောကျပဲပွောငျးလဲသှားပါစေ ပရိသတျတှကေ သဘောကစြှဲမကျနမွေဲပါပဲ။ သူမဟာ တဈခတျေတဈခါက မငျးသမီးတဈလကျအနနေဲ့လညျး ဇာတျကားတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အနုပညာလောကထဲကနေ နှဈပေါငျးအတျောကွာ ပြောကျကှယျသှားခဲ့ပွီး ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျသှယျပွတျတောကျသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဆိုရှယျမီဒီယာသုံးစှဲမှု တှငျတှငျကယျြကယျြခတျေစားလာတဲ့အခါမှာတော့ အေးဝတျရညျသောငျးဟာ အေးသောငျးဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကတဆငျ့ ပရိသတျကွီးရှကေို့ ပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့ပါတော့တယျ။ မအေးသောငျးကတော့ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြထကျကနေ မွနျမာအမြိုးသမီးတို့ အမွတျတနိုးတနျဖိုးထားရတဲ့ မွနျမာဝတျစုံလေးတှကေို တဈနတေ့ဈမြိုးမရိုးရအောငျ ဝတျဆငျထားတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝခေဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ သူမအပျေါအာရုံစိုကျမိလာကွပွီး ဆကျလကျအားပေးခဲ့ကွပါတယျ။ မအေးသောငျးဟာ ယခုခြိနျမှာတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို တစိုကျမတျမတျပွနျလညျလုပျဆောငျနပွေီဖွဈပမေယျ့ သူမရဲ့နှလုံးသားရေးရာကိုတော့ ပရိသတျတှရှေကေို့ တရားဝငျခပြွထားတာမြိုးမရှိသေးပါဘူး။ မကွာသေးခငျကလညျး သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကနေ “ရညျးစားဟောငျးရဲ့ လကျသုံးစကား…. လကျရှိသူ့ကိုတှဲနပေမေယျ့ ကိုယျ့ရငျထဲမှာ ရှိတာကတော့ မငျးတဈယောကျပဲ….လို့ ဆိုပွီးပွောတာ မငျးနျော။ ကိုယျကဘာမှ သိတာမဟုတျဘူး”…. လို့မြှဝခေဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေတော့ အပြိုကွီးမအေးသောငျးရဲ့ ရညျးစားဟောငျးက ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုပွီး စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။
အပြိုကွီးမအေးသောငျးရဲ့ အမာခံပရိသတျတှကေတော့ သူမရဲ့ပို့ဈအောကျမှာ မှတျခကျြတှအေမြိုးမြိုးပေးပွီး အားပေးစကားဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ Cele Connections ပရိသတျကွီးကလညျး မအေးသောငျးတဈယောကျ ရညျးစားဟောငျးကွောငျ့ ခံစားနရေတဲ့ဝဒေနာတှကေနေ အမွနျဆုံးကငျးဝေးပွီး ပြျောရှငျတဲ့နသေ့ဈလေးတှကေို ထာဝရပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ဆုမှနျကောငျးလေးတောငျးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။
ယုန်လေးရဲ့ အနုပညာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုပြီး ယုန်လေးအတွက် အားပေးစကားပြောလာတဲ့ ဘုန်းလျှံ
” အမေစုကို အခွင့်အခါသင့်ရင် ကိုယ်တိုင်ပန်းပန်ပေးချင်ကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ မေဦး”